Baraha Bulshada ee Nambarada | Martech Zone
Jimco, Juun 24, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Shalay, waxaan ku soo bandhignay Muuqaal qurux badan oo ku saabsan Taariikhda Xiriirka Bulshada. Maanta, waxaan helnay macluumaad kale oo cajiib ah - Xaaladda Hadda ee Shabakadaha Bulshada. Waa aragti qoto dheer oo caalami ah oo ku saabsan shabakadaha bulshada cabir ahaan, tira ahaan, iyo kobcintooda - iyadoo la siinayo xoogaa aragti ah in aan gaarno iyo in kale. Infograafigani waa xushmad Huriso Baraha Bulshada.
Hal shax oo laga yaabo inay fikrad khaldan ka dhiibato ayaa ah Ning, kaasoo beddelay qaabkeedii ganacsi ee bilaashka u ahaa shabakadaha lacagta lagu bixiyo. Dabcan waxay lumiyeen dad aad u tiro yar markii ay guureen - laakiin dhab ahaantii si fiican ayey u korayaan 2011 iyagoo ah Software ahaan adeeg bixiye shabakadeed adeeg.
Maalgashi Weyn: TinderBox
Jun 24, 2011 at 12: 08 PM
Dhab ahaantii waa infographic xiiso leh, laakiin ma jirin lambarro meel kasta! Way fiicantahay in la ogaado in Plaxo ay tahay meesha ay ku nooshahay tirada ugu da'da weyn, laakiin waxay ka faa'iideysan laheyd lambarro adag oo halkaas ku jira.
Waad ku mahadsantahay wadaagida Doug
Jun 24, 2011 at 12: 20 PM
Nabad Jeremy! Xogta iyo natiijooyinka waxay kujiraan warbixin kuqoran qeybta hoose ee Infographic (waa inaan taas ku idhi boostada! http://bit.ly/2011-social-analysis
Waad ku mahadsantahay sida daacadnimada ah ee aad ii ilaalisay!
Jun 24, 2011 at 12: 44 PM
Hooray oo loogu talagalay LinkedIn!